Hovahana ny rivotra efatry ny lanitra
"Aza manimba ny tany, na ny ranomasina, na ny hazo, mandra-panisinay tombo-kase eo amin'ny handrin'ny mpanompon'Andriamanitsika."- Apôk. 7:3.
Manodidina an'izao tontolo izao ireo anjely, manakana ny fisehosehoan'i Satana ho manana ny fahefana fara tampony noho ny amin'ireo vahoaka marobe momba azy. Tsy rentsika ny feo ary tsy hitan'ny masontsika ny asa ataon'ireo anjely ireo, kanefa mifampitantana manodidina an'izao tontolo izao izy ireo, ka manara-maso tsy mitsahatra ary manosika ireo tafik'i Satana mandra-panisy tombokase eo amin'ireo vahoakan'Andriamanitra.- SDABC, b.7, t. 967.
Naseho an'i Jaona ireo toe-javatra eo amin'ny natiora - ny horohorontany, ny rivo-doza ary ny fifandonana ara-pôlitika - izay nolazaina fa mbola hazonin'ireo anjely efatra. Eo ambany fifehezan'Andriamanitra ireo rivotra efatry ny lanitra ireo mandra-panomezan'Andriamanitra azy baiko ny hamotsorana izany. Ho fiarovana ny fiangonan'Andriamanitra izany. Mankatò ny Teniny ireo anjelin'Andriamanitra ny amin'ny hihazonana ny rivotra efatra amin'ny tany, mba tsy hisy rivotra hitsoka amin'ny tany, na amin'ny ranomasina, na amin'ny hazo akory aza, mandra-panisy tombokase eo amin'ny handrin'ireo mpanompon'Andriamanitra.- TMGW, t. 444.
Fotoana mahavaka ny sain'ny velon'aina rehetra izao fotoana ankehitriny izao. lreo mpanapaka sy ireo mpitondra fanjakana, ireo olona mitana andraikitra mitaky fitokiana be sy manam-pahefana, ny lehilahy sy ny vehivavy manan-tsaina mandinika avy amin'ny saranga isan-karazany, dia samy mifantoka amin'ireo toe-javatra mitranga manodidina antsika avokoa ny fisainany. Mijery ireo fifandraisana misy eo amin'ny samy firenena izy ireo. Hitan'izy ireo amin'izany ny firimorimon'ny toe-javatra tsirairay avy misy eto an-tany ary tsapany fa efa hisy zavatra goavana tsy ho azo tohaina intsony hitranga tsy ho ela - tsapany fa efa mby akaiky ny fotoan-tsarotra faran'izay goavana mahavaka ny sain'izao tontolo izao.
Nisy fotoam-piadanana nomen' Andriamanitra antsika noho ny fahasoavany. Natao hampiasaina amin'ny asa nampanaovin'Andriamanitra antsika ho famonjena ireo efa ho faty ao anatin'ny tsy fahalalana ny hery rehetra nampindramin'ny lanitra antsika. Asaina mampaneno ny hafa-pampitandremana manerana ny faritra rehetra eto amin'izao tontolo izao isika. (...) Misy asa lehibe tsy maintsy atao, ary napetraka amin'ireo izay mahalala ny fahamarinana natao hotorina amin'izao andro izao izany asa izany.- RH, 23 Novambra 1905.